FAHASALAMAM-BAHOAKA: NANOLOTRA SOLOSAINA MIISA 37 HO AN’NY MINISITERA NY USAID MADAGASCAR
On jan 28, 2020 6 981
Nanolotra solosaina laptop miisa 37 mitentina 31.000 dolara (maherin’ny 114 tapitrisa ariary) ho an’ny minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka, tamin’ny alàlan’ny tetikasa IMPACT, ny Sampandraharaha Amerikana Misahana ny Fampandrosoana Iraisam-pirenena (USAID). Izany fanampiana izany dia hanampy ny ministera hahatratra ny tanjona hiantoka ny fahazoan’ny vahoaka malagasy vokatra ara-pahasalamana.
Nisy ny lanonana natao tao amin’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka izay nanoloran’ny Tale Jeneraly mpisolo toerana ao amin’ny USAID, Atoa Mike Stern, izany fanomezana izany ny Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka Pr. Julio Rakotonirina. Nanamarika izay teo am-pitenenana fa, « ny USAID sy ny Minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka dia miaraka manatsara ny fahaiza-mitantana sy ny fahafaha-mahefa ara-teknika eo amin’ny sehatry ny fanomezana fitsaboana eto Madagasikara. »
Ireo solosaina laptop ireo dia hanampy ny Ministera hanatsara ny planina, ny fanaraha-maso ary ny vinavina mikasika ny vokatra ara-pahasalamana misy ao amin’ny rafitra famatsiana. Hampiasaina koa izy ireo amin’ny fametrahana système d’information sur la gestion logistique na SIGL. Ity farany ity moa dia manome fomba haingana sy mora ampiasaina ary manara-penitra hanarahana ny momba ny kojakoja ara-pahasalamana an-jatony : manome fampitandremana mialoha raha misy entana lany, ny fitsinjarana indray ny entana raha ilaina izany, ary mampahomby ny rafitra sy mampihena ny fandaniam-poana.
Natomboky governemanta amerikanina, amin’ny alàlan’ny USAID, ny tetikasa IMPACT tamin’ny taona 2018 hanatsarana hatrany ny fahasalaman’ny vahoaka malagasy amin’ny alàlan’ny fiantohana ny fahazoana vokatra ara-pahasalamana ilaina ho an’ny fahasalaman’ny reny sy ny zaza, ny fandrindram-piterahana, ary ny ady amin’ny tazomoka. Ny IMPACT dia manamafy ny fahafaha-mahefan’ny seha-panjakana hitantana ny famatsiana vokatra ara-pahasalamana.
ASAM-PANJAKANA AMBONY: MIISA 7855 NY FANGATAHAN’ASA VOARAIN’NY FANJAKANA